घाँटी सुन्निनु (Neck Swelling) - निरोगी नेपाल मा स्वागत छ निरोगी नेपाल मा स्वागत छ
चिउँडो र क्याविकल हड्डी (वा कोलरबोन) का बीच हुने कुनै पनि असामान्य वृद्धि लाई घाँटी सुन्निएको मानिन्छ । सामान्यतया घाँटी सुन्निने रोग लसीका (Lymph) ग्रन्थिहरु वा थाइरोइड ग्रन्थि को रोग का कारण हुन्छ। कहिलेकाहीं र्‍याल ग्रन्थीहरू को र मांसपेशी एवं घाँटी वरिपरि को छालाका रोगहरु ले गर्दा पनि घाँटी सुन्निन सक्छ। लसीका ग्रन्थिहरु ठूलो भएका कारण घाँटी सुन्निनु ले टाउको, कान, मुख र घाँटी सम्बन्धित रोग लागेकाे संकेत गर्छ । प्राय: 12 वर्ष उमेर सम्म का बच्चा मा लसीका ग्रन्थिहरु अलि अलि बढेको देखिन्छ। कसै कसैको भने जन्मदा नै घाँटी सुन्निन सक्छ। धेरैजसो घाँटी मा देखिने पिण्डहरू क्यान्सर भने हुँदैनन् तर उमेर वृद्धि को साथै क्यान्सर मा परिणत हुने संम्भावना भने बढ्दै जान्छ। अन्य रोग को लक्षण ले गर्दा घाँटी सुन्निनु बाहेक, तपाईंलाई खाँदा कठिन, सास फेर्न कठिन तथा नशा मा बढी रगत का कारण घाँटी देखि माथी र अन्य अङ्गहरू मा समेत बाधा पर्ने लक्षण देखिन्छ।
कतिपय घाँटी सुन्निने अवस्थाहरु हानिरहित हुन्छन् र आँफै निको पनि हुन्छन् । कतिपय सौन्दर्य प्रशाधन का कारण ले हुने हुँदा तिनलाई सो कारण हटाएर निको पार्न सकिन्छ भने कतिपय गम्भीर प्रकृति का हुने हुँदा राम्ररी जाँच गरेर डाक्टरी उपचार बाट निदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घाँटी सुन्निनु का कारणहरु :
१. लसिका ग्रन्थीहरु सुन्निनु :
सर्वत्र हुन सक्ने संक्रमण : जब लिम्फ ग्रन्थी ब्याक्टेरिया वा भाइरस संक्रमण का कारण सुन्निन्छ, यो सामान्यतया पीडादायी हुन्छ र घाँटी को सो भाग हलुका रातो एवम् छाम्दा तातो महसुस गरिन्छ । यसलाई प्रतिक्रियात्मक लिम्फाडेनिटिस भनिन्छ । यदि तिनमा पीप बन्यो भने तेसलाई निष्काशित गर्नु पर्छ । पीप नबनेको अवस्था मा त्यो उपचार गरे पनि वा नगरे पनि विस्तारै आँफै निको हुन सक्छ ।
भाइरस का कारण ले हुने राता चाला । जस्तो कि शीतला, रुबेला, मोनोन्यूक्लियोसिस आदि।
स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया वा भाइरस का कारण हुने घाँटीको घाऊ
छाला वा घाऊ मा हुने संक्रमण । जस्तो कि सेलुलिट्स वा विसर्प (एरिसिपेलास्)
कान को संक्रमण
गीँजा को संक्रमण तथा घाऊ
एचआईभी / एड्स
असामान्य संक्रमण :
क्याट स्क्रयाच ज्वरो— बिरालो ले चिथोर्नाले वा टोक्नाले हुने रोग
सिफिलिस— यौन सम्पर्क बाट सर्ने रोग
टोक्सोप्लाज्मोसिस— रोगी बिराला को आची को संसर्ग बाट वा काँचो मासु खानाले हुने रोग
क्यान्सर : क्यान्सरकोषहरु को वृद्धि का कारण लिम्फ ग्रन्थी सुन्निएको भएमा यो झन् नराम्रो लक्षण हो । यसले कतै बाट क्यान्सर फैलँदै आएको संकेत गर्दछ । यस्तो अवस्था मा लिम्फ ग्रन्थी को आकार सुन्निएर केराउ को दाना जत्रो वा राजमा जत्रो वा त्यो भन्दा पनि ठूलो हुन सक्छ । यस्ता लिम्फ ग्रन्थीहरु यताउति नहल्लने र साह्रा खालका हुन्छन् ।
ल्यूकेमिया— रक्त क्यान्सर
लिम्फोमा— लिम्फ्याटिक टिस्सूहरुबाट फैलेको क्यान्सर
टाउका को क्यान्सर, घाँटी वा माथिल्लो जीआई ट्रयाक को क्यान्सर अथवा शरीर का अन्य अंग मा भएर फैलँदै आएका क्यान्सर ।
प्रतिरक्षा प्रणाली मा बिकार :
सिस्टेमिक लुपस एरिथम्याटस— छाला, जोर्नी, मिर्गौला, मुटु, फोक्सो तथा रक्तकोष लाई प्रभावित पार्ने दीर्घ प्रकृति काे राेग
बाथज्वरो— जोर्नी मा भएको साइनोभियम लाई सुन्निने पार्ने खालको एक जीर्ण रोग
केही औषधिहरु : फेनिटोइन (छारे राेग मा दिइने औषधि) ले पनि लिम्फ ग्रन्थी लाई सुन्निने पार्न सक्छ ।
२. थाइरोइड ग्रन्थी सुन्निँदा : थाइरोइड ग्रन्थी लाई प्रभाव पार्ने खालका रोग का कारण थाइरोइड ग्रन्थी सुन्निन गएमा पनि घाँटी सुन्निन्छ जुन खानेकुरा निल्दा चलेको देखिन्छ । यसको कारण तलका मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ—
आयोडीन को कमी का कारण हुने गलगाँड
प्रतिरक्षा का लागि आफ से आफ ग्रन्थी सुन्निएमा
थाइरोइड ग्रन्थी को क्यान्सर
३. र्‍याल ग्रन्थी सुन्निएमा : बंगारा को तल स्थित प्यारोटिड ग्रन्थी वा सबम्याण्डिबुलार ग्रन्थी कुनै संक्रमण ले वा क्यान्सर का कारण सुन्निएमा पनि घाँटी सुन्निएको हुन सक्छ।
४. घाँटी मा हानिरहित मांसपिण्ड भएमा : कहिलेकाहीं बोसोयुक्त टिस्सूहरु मिलेर मांसपिण्ड को निर्माण पनि हुन सक्छ । जो लिपोमा वा सिस्टिक पिण्ड हुन सक्छ । यसले सामान्यतया कुनै समस्या खडा गर्दैन तर कहिलेकाहीं यो पनि संक्रमित भएर अरु सुन्निन र पीडा दिन सक्दछ । त्यस्तो मांसपिण्ड मा चोटपटक लाग्ने अथवा टर्टिकोलिस पनि हुन सक्छ ।
डाक्टर लाई कहिले देखाउने ?
यदि तपाईंको घाँटी सुन्निएको छ वा लिम्फ ग्रन्थी सुन्निएको छ भने र तलका अवस्थाहरु देखिएका छन् भने डाक्टर लाई देखाउनु जरुरी हुन्छ ।
कुनै विशेष कारण विना लिम्फ ग्रन्थीहरु सुन्निएर आउनु
दुई देखि चार हप्ता सम्म पनि लिम्फ ग्रन्थीहरु सुन्निइरहनु
छाम्दा लिम्फ ग्रन्थी साह्रा अथवा रबर जस्ता लाग्नु अथवा घुचेट्दा नसर्नु
घाँटी क्रमशः सुन्निँदै जानु
घाँटी सुन्निनु सँगै तौल घट्नु, राति मा पसिना आउनु अथवा ज्वरो आउनु
घाँटी सुन्निनु सँगै घाँटी मा घाऊ हुनु र खानेकुरा निल्न र सास फेर्न अपठेरो महसुस हुनु
सुन्निएको लिम्फ ग्रन्थी सँगै विभिन्न जटिल अवस्थाहरु देखिनु : फोरा उठ्नु, सेप्सिस (रक्तप्रवाह मा हुने संक्रमण), सेलुलिटिस (छाला मुनि को तन्तु को संक्रमण), फिस्टुला (क्षयरोग का कारण लिम्फ ग्रन्थी सुन्निनु) आदि
उपचार का विकल्पहरु :
भाइरस को संक्रमण बाट हुने लिम्फ ग्रन्थि सुन्निएमा सो संक्रमण ठीक भए पछि अाँफै ठीक हुन्छ । भाइरल संक्रमण मा एन्टीबायोटिक को प्रयोग गरिँदैन । अरु कारण बाट घाँटी सुन्निएको भए कारण पत्ता लगाएर सो को उपचार गरिन्छ—
संक्रमण : ब्याक्टेरियल संक्रमण बाट लिम्फ ग्रन्थी सुन्निएको भएमा डाक्टर ले उपयुक्त एन्टिबायोटिक खाने सल्लाह दिने छन् । यदि एचआईभी संक्रमण नै लिम्फ ग्रन्थी सुन्निनु को मुख्य कारण हो भने तपाईंलाई एन्टीरिट्रोभाइरल चिकित्सा गरिने छ । यदि भित्र घाऊ भएर पीप जमेको अवस्था छ भने शल्यक्रिया बाट पीप फाल्ने काम गर्न सकिन्छ ।
क्यान्सर : यदि घाँटी सुन्निनु का पछाडीको कारण क्यान्सर हो भने तपाईंलाई क्यान्सरको उपचार गरिने छ । क्यान्सर को प्रकार र अवस्था हेरेर एक वा एकभन्दा बढी रसायन चिकित्सा (केमोथेरापी) वा शल्यक्रिया वा विकिरण चिकित्साको प्रयोग गरिने छ ।
यदि तपाईंका सुन्निएका लिम्फ ग्रन्थीहरु पीडादायी छन् भने तातो पानी मा भिजाएको कपडा ले सेकेर पीडा बाट मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसो गर्दा पनि दुखिरह्यो भने दुखाई कम गर्ने एस्पिरिन, इबुप्रोफेन या प्यारासिटामोल जस्ता औषधि को प्रयोग गर्न र यथेष्ट रुप मा आराम लिन सकिन्छ ।
लोकमणि पौडेल र अस्मिता भट्टराइ ले पनि यो लेखमा योगदान गर्नुभएको छ।
आवाज मा परिवर्तनघाँटीघाँटी सुन्निनुनिल्न गाह्रो हुनुसास फेर्न गाह्रो हुनु
परिचय खोकी भनेको हाम्रो [...]
घाँटी मा घाऊ (Sore Throat)
परिचय : घाँटी को [...]